क्याम्पस र प्रहरी चौकीलाई जग्गा- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
क्याम्पस र प्रहरी चौकीलाई जग्गा
रोल्पा — स्थानीय तहको चहलपहल वृद्धिसँगै पश्चिमी रोल्पास्थित त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र जुगारको नेर्पामा सरकारी संरचना बसाल्न जग्गा दान गर्नेहरू बढेका छन् । सरकारी कार्यालयहरू गाउँमा आए विकास हुने भन्दै जग्गा दान गर्ने बढेका हुन् ।
गाउँपालिका कार्यालयका अनुसार क्याम्पस, प्रहरी चौकी, रेडक्रस, विद्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन स्थानीयले महँगो मूल्य पर्ने जग्गा दान गरेका छन् । ‘कार्यालय भवन बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा स्थानीयले निःशुल्क दिएका हुन् । दानी भेट्दा हामी पनि खुसी छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भने ।
उनका अनुसार नेर्पामा सञ्चालित नव नेपाल क्याम्पसको भवन बनाउन आवश्यक जग्गा दिनेबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको थियो । क्याम्पसलाई स्थानीय पूर्वशिक्षकहरू कुलानन्द गिरी, सम्झना गिरी र चंखबहादुर वलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै पर्याप्त जग्गा दिएका छन् । गिरी परिवारले क्याम्पसलाई १४ रोपनी र वलीले ११ रोपनी क्षेत्रफलको महंगो मूल्यको जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका हुन् । दाताहरूले दिएको जग्गामध्ये नेर्पामा क्याम्पस भवन बनाइएको छ भने बयलडाँरीमा छात्रावास भवन बनाइएको छ । नेर्पाको जौलीलाँकुरीमा निर्माणाधीन इलाका प्रहरी चौकीलाई आवश्यक परेको जग्गासमेत स्थानीयले निःशुल्क प्रदान गरेका हुन् । प्रहरी चौकीका लागि सात रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा स्थानीय चार जनाले दिएका हुन् । गोकुल भण्डारीले पाँच रोपनी, उनका छोरा माधव भण्डारीले आधा रोपनी, उत्तिमा डाँगीले एक रोपनी र चोपराज विकले आधा रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा दिएका हुन् । प्रहरी चौकीलाई जग्गा दिँदासमेत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्रहरी चौकीलाई स्थानीय जीवराज खड्काले नेर्पाको उकालोनजिक तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा दिएका छन् । प्रहरीचौकी भवन हाल जौलीलाँकुरीको सात रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ ।
यसअघि रेडक्रसको जुगार शाखाका लागि स्थानीय दलबहादुर राना लगायतले सित्तै जग्गा दिएका थिए । उनकै पहलमा धार्मिक संस्था निरंकारी समूहलाई समेत निःशुल्क जग्गा दान गरिएको थियो । सामाजिक कार्यमा चासो दिने गरेकाले सार्वजनिक प्रयोगका लागि महंगो जग्गा दान गरेको क्याम्पसका जग्गादाता पूर्वशिक्षक चंख वलीले बताए । दाताहरूले जग्गा प्रदान गरेकाले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न सजिलो भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष वलीका अनुसार जुगार क्षेत्रका दानी व्यक्तिहरूले पञ्चायतकालदेखि नै विद्यालय, सामाजिक संस्थालगायतलाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने गरेको बताए । ‘सहयोगी भावना र दानी स्वभाव भएकाले निरन्तर रूपमा जग्गा दान दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राम्रो चलन हो ।’ यस क्षेत्रका थुप्रै विद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा दान गरेका व्यक्तिहरूको सम्मान र स्मृतिमा ती विद्यालयको नामकरण गरिएको छ । भौगोलिक अवस्थाले समथर र फराकिलो ठानिएको त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र बढ्दो जनघनत्वले जग्गाको मूल्य बर्सेनि वृद्धि हुने गरेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि यस क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, शैक्षिक संस्थाप्रति स्थानीयले जग्गा दान गरेर प्रेम दर्साउने गरेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:१२
उमेर नपुग्दै विवाह गरेर सुत्केरी हुनेको संख्या बढेको अस्पतालको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मंसिर १७, २०७६ विप्लव महर्जन
(सल्यान) — गत वैशाख तेस्रो साता बालविवाह गरिरहेको आरोपमा शारदा नगरपालिका–६ मधमकाँडाका १९ वर्षीय भूपेन्द्र केसी र उनका बाबु दलबहादुर खत्री एक बालिकासँगै पक्राउ परे । असार तेस्रो साता बालविवाहकै अभियोगमा शारदा नगरपालिका–४ पिपलनेटाकी विष्णुकुमारी बस्नेत, उनका छोरा योधन र पुरोहित अशोककुमार गौतमसहित एक किशोरीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसले पछिल्लो समय बालविवाह गर्नेविरुद्ध प्रहरीको कारबाही आक्रामक हुन थालेको देखाउँछ । जिल्लामा बालविवाहविरुद्धका विभिन्न अभियानमा स्थानीय सरकारको पनि साथ छ । यति हुँदाहुँदै पनि बालविवाह भने रोकिएको छैन । जिल्लामा ६९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमै छ । विवाहितका विषयमा तयार तथ्यांकअनुसार १० वर्षको उमेरमा १ सय १३, १० देखि १४ वर्षभित्र ७ हजार ९ सय ४१ र १५ देखि १९ वर्षको उमेर समूहमा ७२ हजार ३ सय ७८ जनाले विवाह गरेका छन् ।
विभिन्न संघसंस्था, विद्यालय, बाल क्लबलगायत पनि बालविवाहविरुद्धको अभियानमा छन् । केही विद्यालयले बालविवाह गरेकालाई पढ्न नै नआउनू भनेका पनि छन् । सामाजिक मान्यता, गरिबी, बेरोजगारी, देखासिकी, सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग आदिका कारण बालविवाह नघटेको शारदा नगरपालिका–७ ओखरेनीका हर्कबहादुर रावतले बताए । ‘पहिले पहिले महिनावारी नहुँदै छोरीको विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो गलत संस्कार अझै पनि कतिले छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘देखासिकी र घरपरिवारको दबाबले पनि सानै उमेरमा विवाह भइरहेको छ ।’ अभिभावकले बालबालिकालाई निगरानीमा नराख्दा पनि हुने आफूखुसी विवाहमा उमेर नपुगेकाहरू भेटिने उनको भनाइ छ ।
बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियान चले पनि मूल कारण माथि सरकारको ध्यान जान नसकेको शिक्षासेवी अनन्तराम आत्रेयले बताए । ‘सूचनाप्रविधिको विकासले हामीलाई ज्ञानगुनका कुरा सिक्न सजिलो पार्नु पर्ने हो, तर दुरुपयोगले बालविवाहलाई प्रश्रय दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब नियन्त्रण पनि गाह्रो छ । केही न केही त गर्नैपर्छ ।’ अधिकांश अभिभावकले बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाएर मात्र विवाह गराउने सोचाइमा भए पनि आफै भागेर विवाह गर्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । कानुनी सचेतनाको अभावका कारण गाउँमा विवाह बढी हुने गरेको उनले सुनाए । ‘थाहा पाउँदा प्रहरीले कारबाही गर्छ भनेर थाहा नपाउने छैनन्, बालविवाह घटेको छैन,’ उनले भने ।
सानै उमेरमा विवाह गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य र शैक्षिक योग्यता प्रभावित भइरहेको निराजन माविका प्रधानाध्यापक धर्मबहादुर बुढा बताउँछन् । ‘बालविवाह गरे विद्यालयमा प्रवेश नदिइने भनेर हामीले नियम बनायौं,’ उनले भने, ‘केही विद्यार्थीले पढाइ छोडेरै विवाह गरे ।’ कानुनी कारबाही बढे बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनन्,’ उनी गुनासो गर्छन् ।
जिल्लामा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा सुत्केरी हुनेको संख्या बढिरहेको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. अर्जुन बुढाले बताए । ‘सानै उमेरमा विवाह गर्नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘परिवक्व नभइ विहे गर्दा किशोरीको गर्दा गर्भ तुहिने, रक्तश्राव हुने, बच्चा जन्माउन गाह्रो हुने र ज्यानै जानेसम्मको अवस्था आउँछ ।’ अधिकांश किशोरीलाई शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी बनाउनुपर्ने बाध्यता त्यसैका कारण भइरहेको उनले बताए । ‘उमेरै नपुगी बिहे गर्ने धेरैजनाको पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थालेका छन् ।’ कम उमेरमा सन्तान जन्माउँदा मातृ–शिशु मृत्युदरको उच्च जोखिम रहेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बालविवाह नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई कारबाही गर्दै आए पनि रोक्न सजिलो नभएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी ढकेन्द्र खतिवडा बताउँछन् । घरायसी वातावरण, परम्परागत सस्कार र सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रयोगले कम उमेरमा विवाह गर्ने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । ‘बालबालिकालाई प्रहरी हिरासतमा मिल्दैन । उनीहरूलाई सजाय दिन नमिल्ने भएपछि चेतावनीसहित छोड्छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि फेरि बिहे गर्छन । रोक्नै गाह्रो भइसक्यो ।’
शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारी बालविवाह नियन्त्रण अभियानलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सके नियन्त्रण गर्न धेरै समय नलाग्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार बालविवाह नियन्त्रणकै अभियानका क्रममा ९४ जना पण्डितलाई कानुनी प्रावधानबारे प्रशिक्षण दिइएको छ । ‘जिल्लाका सबै ठाउँमा पण्डित राखेर विवाह गराउने चलन बढी छ,’ उनले भने, ‘अब जन्मदर्ता हेरेर मात्र विवाह गराउन वाचा गराइएको छ, यसले पनि केही हदसम्म बालविवाह न्यूनीकरण हुने अपेक्षा छ ।’
सिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले बाल क्लब, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी लगायतलाई परिचालन गरी बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सक्रिय बनाइएको बताए । ‘प्रयास गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि चलिआएको परम्परा एकैपटक रोक्न गाह्रो हुँदो रैछ ।’ अशिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभावका कारण बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । महिला तथा बालबालिका शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई एकद्वार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बढ्दै स्वास्थ्य समस्या
जिल्ला अस्पतालको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष करिब चार सयको संख्यामा किशोरी आमाहरू सुत्केरी भए । २० वर्षमुनि उमेरका सुत्केरीमध्ये अधिकांशलाई कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. बुढाले बताए । ‘कतिमा कुपोषणको समस्या त केहीमा रक्त अल्पताको,’ उनले भने, ‘उमेर नभै नपुगी गर्भवती भएका करिब ४० प्रतिशतलाई अस्पतालले नर्मल डेलिभरी गराउन सकेन ।’ प्रजनन् अंगको पूर्ण रूपमा विकास नभई सुत्केरी हुँदा अधिकांशमा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको उनले बताए ।
अस्पताल ल्याइएकामध्ये केहीलाई मानसिक समस्या पनि देखिएको छ । घरमै असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुने किशोरी आमाको ज्यानै जोखिममा पर्नेगरेको डा. बुढाले सुनाए । ‘जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुर्‍याए पनि हामीले धेरैको ज्यान जोगाएका छौं,’ उनले भने, ‘केही वर्षयता जिल्ला अस्पतालमै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा उपलब्ध भएपछि मातृ तथा शिशु मृत्युदर घट्दै गएको छ ।’
जिल्ला अस्पतालमा दैनिक उपचारका लागि आउने करिब दुई दर्जन महिला कम उमेरमै विवाह गरेका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुने गरेको पाइएको डा. बुढा बताउँछन् । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक सयदेखि एक सय ५० जना बिरामी दैनिक उपचारका लागि आउँछन् ।
सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेका छन् । सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमध्ये आधाजसो उमेर नपुगी बिहे गरेकाहरू हुने गरेको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत वर्ष यस्ता २ सय ९ मुद्दा परे । अदालतका अनुसार ५२ पुरुष र एक सय ५७ महिलाले गत वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सबैभन्दा बढी मुद्दा बालविवाहले निम्त्याएको अधिवक्ता निरज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अदालतमा पर्ने मुद्दाको करिव ४५ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदकै हुन्छन् भने त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा बालविवाहका कारण सिर्जित समस्याका कारण दर्ता हुने गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘नयाँ देवानी संहिताले पुरुषलाई पनि अधिकार दिएपछि महिला र पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेदको प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।’ सानै उमेरमा विवाह गर्ने र सामान्य कुरामा खटपट हुँदा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:१०
दिन बिराएर लोडसेडिङ
‘बाबुको टुंगो’ नहुँदा भएन जन्मदर्ता